I-china 16.8V Lithium battery power drill Ukukhiqiza neFektri | Feihu
Isilinganiso seshaja: 110V ~ 240V
Amandla wokufaka: 50 / 60HZ
Isivinini sokulayisha: 0-350 / 0-1350 / min
Ukukhanya kwe-LED: yebo
Igiya leTorque: 18 + 1
Torque (esiphezulu): 23-25Nm
Ijubane lamanje: alikho umthwalo wamanje (2.5A ± 10%), inani lesivinini esingalayishi: (igiya eliphansi 0-400r / min ± 10%, igiya eliphakeme 0-1350r / min ± 10%)
Imvamisa ye-Acoustic vibration: vibration≤1.67m / s2, noise≤84dB (A), konke ukusebenza kuhle; (ukuzwa ngesandla, ukuzwa)
I-torque: 1 ~ 18 gear = 0.8 ~ 4.5NM I-low-end MAX torque ephezulu> 24N.M I-torque ephezulu ye-MAX> 16N.M
1: Ubukhulu bezinhlamvu benziwe ngezinto ezintsha sha ze-PA6-GF30, eziqinile futhi ezingazweli ekuweni.
I-2: Igiya lisebenzisa amandla aphezulu we-powder metallurgy material, anokucaca okuphezulu, ukugqoka ukumelana, umsindo ophansi nokuphila kwensizakalo ende.
I-3: Imoto isebenzisa amathayili kazibuthe asebenza kahle, ithusi elihlanzekile le-180-200 degrees, amabhulashi wekhabhoni amelana nokugqoka, futhi inezinzuzo zetorque enkulu, ukusebenza kwamanje okuphansi, amandla okusebenza aphezulu, nempilo yenkonzo ende.
I-4: I-drill chuck isebenzisa i-plastic steel brand chuck ngokugxila okuhle namandla amakhulu wokukhiya, futhi i-chuck inyakazisa kancane.
I-5: Ibhethri lisebenzisa iseli yamandla ka-1500MA / 10C emsulwa, futhi umthamo webhethri ungaphezu kwama-80% ngemuva kwemijikelezo engu-300 yokukhokha nokukhipha. Izinga lokukhishwa liphezulu, amandla omkhiqizo makhulu, futhi impilo yebhethri yinde.
I-6: Ukupakisha kufakwe ebhokisini elibunjiwe ngamandla amahle, elinokuvikelwa okungcono komkhiqizo futhi elimele ukuwa.
I-7: Iswishi yokulawula isivinini isebenzisa ukushintshwa kokusebenza okuphezulu ngoxhumana nabo besiliva, abangakwazi ukumelana nemisinga ephezulu nokusimamisa isivinini. Ifakwe amalambu okukhanyisa e-LED aqinisekisiwe futhi impilo yokushintsha ingaphezu kwezikhathi ezingama-50,000.
I-8: Ibhodi lokuvikela lisebenzisa ithubhu entsha sha ye-MOSS, i-BYD chip, enentengo ekhokhisa ngokweqile, ukukhokhisa ngokweqile, ngokweqile, isifunda esifushane, ukuvikelwa kokushisa neminye imisebenzi, ukusebenza okuzinzile.
I-9: Ishaja isebenzisa ukushaja kwamanje okuyi-real-standard, ishaja ehlala njalo, ishaja yokuvikela ukukhokhisa ngokweqile, ukushaja ukuzinza, nokuvikela ukushaja ibhethri.
Langaphambilini I-12V Lithium battery drill
Olandelayo: 21V Lithium ibhethri yamandla
I-12v Lithium Cordless Drill
Amabhethri Lithium Drill
Khipha ku-internet Lithium Drill
Khipha ku-internet Lithium Ion Drill
I-Cordless Drill Lithium
I-Cordless Hammer Drill Enebhethri Lithium
Ukushayela Intulo Yesishayeli Lithium-Ion
Isikhumulo semikhumbi Yezikebhe Lithium Drill
I-Lithium Battery Drill
I-Lithium Battery Weed Eater
I-Lithium Impact Wrench
I-Lithium Ion Drill Driver
I-Lithium Ion Impact Driver
ILithium Power Drill
Umdli We-Lithium Weed